Samsung oo bilawday barnaamij kireysi casri ah | Wararka IPhone
Samsung ayaa barnaamij kiro ah u soo saartay taleefannada casriga ah
Dhowr maalmood ka hor Apple ayaa waxay soo saartay, xilligan oo keliya Mareykanka, barnaamij cusub oo u oggolaanaya dhammaan isticmaaleyaasha ku raaxayso iPhone-ka lacag yar oo bille ah, si had iyo jeer ay ugu raaxeystaan ​​moodooyinka ugu dambeeya ee ay shirkaddu soo bandhigeyso, oo ah wax ay horay shirkaddu u shaacisay laakiin illaa iyo maalmo ka hor aan weli la soo bandhigin.
Samsung waxay soo bandhigtay barnaamij aad ugu eg kan Apple. Barnaamijkani wuxuu ku habboon yahay dhammaan kuwa isticmaala ee doonaya ku raaxayso Samsung Galaxy S7 cusub iyo S7 Edge laakiin iyagu ma doonayaan ama awoodin inay ku bixiyaan bixinta kharashka boosteejadda hal lacag bixin.
Barnaamijka Casriyeynta Samsung ma heli karo qof walba, laakiin xilligan waxaa loo heli karaa oo keliya Boqortooyada Midowday (UK), dal sameyn doona tijaabo tijaabo ah si loo arko sida dadka isticmaala ay uga jawaabaan qorshahan cusub ee cusbooneysiinta / qalabka kirada. Barnaamijka kor u qaadista Samsung ayaan si sax ah ula mid ahayn barnaamijka Apple (kaas oo aan khusaynin xiisaha hawlgalka) tan iyo markii mudada qandaraasku dhammaatay, qiimaha ugu dambeeya ee qalabku wuu ka qaalisan yahay haddii aan ku bixinay qayb keliya.
Sida ku xusan xogtan, haddii aan ugu dambeyn dooneyno inaan ku raaxeysto Galaxy S7, oo lagu sii deyn doono Boqortooyada Midowday oo loogu talagalay 569 rodol, waa inaan dhignaa lacag dhan 56,90 rodol oo aan bixinno 24 rodol muddo 24,58 bilood ah. Dhammaadka 24-ka bilood, waxaan bixin doonaa wadar ahaan 646,82 rodol, .77,82 XNUMX in ka badan qiimaha alaabta ugu dambeysa markay ku dhacdo suuqa bisha Maarso ee soo socota.
Haddii isticmaaleyaashu ay awoodi karaan oo ay uga sahlan tahay iyaga inta ay ka bixin lahaayeen khidmadda terminal-ka oo buuxa, waa ikhtiyaar wanaagsan in la isticmaalo adeeggan cusub. Haddii kale, dhammaan kuwa doonaya inay ku raaxeystaan ​​terminaalkan, waxay sugi karaan dhowr bilood, maadaama lSaldhigyada Samsung waxay u muuqdaan inay hoos ugu dhacaan qiimaha si dhakhso leh markay suuqa joogeen dhawr bilood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Samsung ayaa barnaamij kiro ah u soo saartay taleefannada casriga ah
Sidoo kale soo socda beta 4 ee tvOS 9.2, watchOS 2.2 iyo OS X 10.11.4